Maraykanka oo ka hadlay weerarkii Bariire - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Maraykanka oo ka hadlay weerarkii Bariire
November 30, 2017 Cali Yare645
Dowlada Maraykanka ayaa beenisay in dad rayid ah lagu diley howlgalo laga fuliyay beer ku dhow deegaanka Bariire ee gobolka Sh/hoose 25kii August ee sanadkan.
War rasmi ah oo ay Milatariga Maraykanka soo saareen ayaa lagu sheegay in dadka howlgalkaa lagu diley ay ahaayeen “Kuwo hubeysan oo cadow ah”.
Warbixin kooban oo ay soo saareen ciidamada Maraykanka gaar ahaan qeybta Afrika ayaa cinwaan loogaga dhigay “Qiimeynta Eedeymaha Dad Rayid Ah Oo La Diley 25kii August Oo La Soo Saaray.”
Sidoo kale warbixinta ayaa lagu sheegay in kahor inta aysan ciidamada gaarka ah ee Maraykanka kana howlgala Afrika si wadajir ah u fulin saaxibadood ay sameeyaan qorshe ballaaran oo loogaga feejignaanayo in dad rayid ah ay howlgaladaa wax ku noqdaan.
Hase yeeshee dadkii lagu diley 25kii August sanadkan deegaanka Bariire xilli aroor hore ayaa baaritaano ay dowlada Soomaaliyeed sameeyeen waxaa lagu sheegay in dadkaas ay ahaayeen dad rayid ah isla markaana ay oggolaatay in dowlada ay ka bixiso magdhow.
Taliyihii ciidamada Xoogga dalka ee xilligaas General Cirfiid ayaa sidoo kale sheegay in dadka lagu diley Bariire ay ahaayeen dad rayid ah.
AQALKA SARE OO SABABO AMNI U XIRAN